Tag: waxyaabaha dijitaalka ah | Martech Zone
Tag: waxyaabaha dijitaalka ah
Axad, Oktoobar 4, 2015 Isniin, Oktoobar 5, 2015 Douglas Karr
Aad ayaan ugu faraxsanahay webinar-keena soo socda ee leh 'Meltwater on Content and Customer Journeys'. Rumayso ama ha rumaysan, suuq-geynta nuxurka ayaa leh oo sii socota. Dhinac, habdhaqanka isticmaaleyaasha wuxuu ku xuubsiibtay sida waxyaabaha loo cunayo iyo sida ay saamaynta ugu leedahay safarka macaamiisha. Dhinaca kale, dhexdhexaadiyeyaashu way isbedeleen, awoodda cabirka jawaabta, iyo awoodda saadaalinta caannimada waxyaabaha. Hubso inaad iska diiwaangeliso